The Winter Olympics ga-enwe drones ike ịchụ nta drones ndị ọzọ | Akụrụngwa n'efu
The Winter Olympics ga-enwe drones ike ịchụ nta ndị ọzọ drones
O di nwute na n'ihi ojiji nke ufodu ndi na-achoputa, n'amaghi ama ma obu n'amaghi ama, na-eme ka drones ha, n'omume obula na ihu nke ihe egwu, taa odi ka odi nkpa itinye udiri usoro nke puru iche na ọnụnọ nke ụfọdụ mmiri na mpaghara ụfọdụ echedoro. Dị ka ị na -eche n'echiche, emume nke Egwuregwu Olimpik Oge Oyi Ha sokwa na ndị isi na-elekọta nzukọ ha ekpebiela uche na nke a.
Echiche kachasị adaba, anyị chere na ọnụego nke mmejuputa ya na ọnụọgụ nke ọma, na ndị na-ahazi nwere bụ iji drones nwere ike ijide drones ndị ọzọ, ya bụ, echiche ahụ na n'oge ọzọ anyị ekpugherelarị anyị nke ga-eji usoro ihe eji eme ihe nke oma nke edoziri nke oma site na ike ya malite usoro nke ụdị drone ọ bụla nwere ike ịfefe site na mpaghara netwọkụ ahụ tọrọ atọ.
Ndị na-ahazi asọmpi egwuregwu nke oge oyi ga-eji drones ndị nwere ụgbụ weghara ihe a na-amaghị ama
Gobanye ntakịrị ntakịrị, dịka ekpughere, o doro anya na drones ndị a ga-efe oge niile na a ịdị elu n'etiti 150 na 200 mita elu. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ ma dokwuo anya banyere ihe na - eme gburugburu ha, ha, na mgbakwunye na netwọkụ ahụ ekwuru, ga - enweta igwefoto onyunyo nwere ike ijide ihe niile na - eme gburugburu ha, n'ụzọ dị otú a Mgbe onye njikwa ahụ chọtara ụfọdụ ụdị ihe a na-amaghị ama na-efe efe n'akụkụ drone ahụ, mmiri ahụ nwere ike ijide ya.
Dị ka ọ dị na n'agbanyeghị na e nwere ụlọ ọrụ na-akpata ụdị mmepe a, eziokwu bụ na ụdị drones a ha abụghị ihe ọ bụla karịa ngbanwe ndị ọkachamara, na ngwa ngwa na oke dị iche iche karịa ụdị drones site na ụdị ndị a ma ama dị ka DJI. Ha nwere capsule nke na-agbapu ụgbụ nke na-agbanye n'etiti motọ nke ụgbọ mmiri ahụ ka ejide ya, si otú a na-eme ka ọ kwụsị ọrụ ma ndị ọrụ nchekwa wee nwetaghachi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » The Winter Olympics ga-enwe drones ike ịchụ nta ndị ọzọ drones
Mozilla na-aga n'ihu na sistemụ arụmọrụ ya, mana ugbu a yana Ihe Gateway